Shiinaha wuxuu dalxiis u adeegsadaa inuu ku cadaadiyo New Zealand inay sahlanaato basaasidda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Shiinaha wuxuu dalxiis u adeegsadaa inuu ku cadaadiyo New Zealand inay sahlanaato basaasidda
Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • Investments • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Shiinaha ma wuxuu daneynayaa inuu dhoofiyo qalabka isgaarsiinta si uu ugu basaaso dalalka. New Zealand sidaas ayey u maleyneysaa, dalxiiskuna waa inuu dhib soo gaaraa sida Shiinaha u aargoosto.
Dalxiiska banaanka ee Shiinaha wuxuu noqdaa aalad siyaasadeed oo sii kordheysa oo dowladda Shiinaha ay cadaadis saarto wadamada bartilmaameedka ah. Digniinta Safarka markale Kanada waa hal tusaale oo keliya. Hadda New Zealand waxay noqotay bartilmaameedkii ugu dambeeyay ee olole dacaayad ah ee warbaahinta dowladda Shiinaha, iyada oo wargeyska Global Times ee ku hadla luuqadda Ingiriisiga uu sheegayo in dalxiisayaashu ay joojinayaan fasaxyadooda si ay uga aargoostaan ​​New Zealand oo ka mamnuucday shirkadda Huawei in ay ku lug yeelato soo saarista 5G.
Huawei Technologies Co., Ltd. waa aaladaha isgaarsiinta caalamiga ah ee Shiinaha iyo soo saaraha korantada macaamiisha, oo xarunteedu tahay Shenzhen. Ren Zhengfei, oo ah injineer hore ee Ciidanka Xoreynta Dadweynaha, ayaa aasaasay shirkadda Huawei sanadkii 198
Bishii Nofeembar shirkadda isgaarsiinta qaranka ee Spark ayaa si kumeel gaar ah looga mamnuucay inay u isticmaasho qalabka Huawei soo saaristii kadib markii hay'adda sirdoonka ee New Zealand ay ka digtay inay keeni karto "khatar weyn oo amniga qaranka ah".
Warbixin lagu daabacay wargeyska afka ingiriisiga ku hadla ee Global Times, oo ah garab tablo ah oo ka tirsan kooxda rasmiga ah ee wargayska xisbiga, ayaa laga soo xigtay qof degan magaalada Beijing oo magaciisa lagu sheegay "Li", isaga oo leh natiijadaas awgeed, wuxuu qorsheynayay inuu joojiyo fasaxiisa New Zealand oo uu aado meel kale. halkii.
Warbixintaan oo ay qaateen warbaahinta New Zealand ayaa timid xilli xiriir aan caadi aheyn uu ka dhaxeeyo labada qaran.
Bishii la soo dhaafay dhacdo weyn oo dalxiis oo u dhaxeysay labada dal ayaa si aan xad lahayn loo hakiyay, diyaarad Air New Zealand ah ayaa laga celiyay Shanghai.
Shirkadda isgaarsiinta ee Huawei ayaa soo bandhigtay xayaysiis heer sare ah oo xayaysiis ah, oo loogu talagalay in lagu cadaadiyo dowladda Auckland inay saxiixdo kaqeybqaadashadeeda guud ahaan 5G.
Booqasho ay ra'iisul wasaaraha New Zealand, Jacinda Ardern, ku tagi lahayd Beijing ayaa la joojiyay dabayaaqadii 2018 iyada oo aan la xaqiijin taariikh cusub
Xayiraadda Huawei iyo Baasifigga “dib u dejin” - xoojinta xiriirka New Zealand ee gobolka Baasifigga si looga hortago saameynta sii kordheysa ee Shiinaha - ayaa xiriirka New Zealand iyo Shiinaha ka dhigay “mid aad uga kacsan” marka loo eego dowladdii hore ee Qaranka, ayuu yiri Young.
Dhibaatooyin kale, kuwa yaryar, ayaa xiisadda ku sii daray. Xiriirka Shiinaha uu la leeyahay dalal badan oo reer galbeed ah labadii sano ee ugu dambeysay aad buu u xumaa, gaar ahaan Mareykanka. New Zealand, kama badbaadi karno isbeddelada noocan oo kale ah ee caalamiga ah, laakiin sidoo kale waxaan leenahay xiriir dheer waxaana jira waxyaabo badan oo wanaagsan oo sii socda, ”ayuu yiri Young.
New Zealand waxay ku dhowaad nus malyuun dalxiisayaal Shiine ah 2018, taas oo ka dhigaysa isha labaad ee ugu badan ee soo booqda marka laga reebo Australia.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka National Party, Simon Bridges, ayaa sheegay in "xiriirka sii xumaanaya ee dowladda" ee Shiinaha ay khatar gelinayso xiriirkii ganacsi ee qiimaha badnaa. Laakiin Ardern wuxuu yidhi in kastoo labada dalba ay haysteen “caqabado” xiriirkooduna uu ahaa mid adag.
Hilton 1, Hyatt 2, Marriott kaliya 5 oo ka badbaaday COVID ...